Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọdịmma Mmekọahụ US ruru ijeri $9 nwere atụmatụ ọhụrụ
A na-atụ anya na ahịa ịdị mma mmekọahụ US ga-eto na CAGR nke 8.27% n'ime oge 2020-2026. Nyocha miri emi na nghọta data chụpụrụ na mmetụta COVID-19 gụnyere n'ime akụkọ ahịa ịdịmma mmekọahụ nke US.
Isi ihe enyere na akụkọ a:
• Ọchịchọ maka ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ sitere na ọwa ịntanetị juru ebe niile na US.
• Ịnweta ịntanetị dị mfe na ịdị mma na nkasi obi nke ịzụ ahịa maka ngwaahịa ndị a site na ọwa ịntanetị emeela ka ọganihu nke ndị na-azụ ahịa buru ibu na mba ahụ.
• Ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ nke a na-enye n'ịntanetị na-akwụ ụgwọ dị ka a na-enyekarị ha na ọnụ ahịa ọnụ ala, nke na-adọta ndị ọrụ njedebe na-enwe mmetụta. Mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị irè isi kwalite na ịkwanye iji condom nwanyị n'etiti ụmụ nwanyị.
• Ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-etinye ego na mmasị na-eto eto n'etiti ndị na-ege ntị. Enweela mbọ mgbe niile site n'aka ndị na-ere ahịa iji mee ka nke a kwụsị ịkparị mkparị, ihe arụ, na akara ngosi ihe na-akpali agụụ mmekọahụ agbakwunyere n'ahịa ma gbanwee ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ na shelf bụ isi.
• A na-arị elu n'ịchọ condom ndị na-esi ísì ụtọ sitere n'aka ụmụ nwanyị na ndị di na nwunye. Ọtụtụ obere ndị na-ere akara nke onwe na-abata n'ahịa nwere ụdị ngwaahịa pụrụ iche maka ndị ọrụ njedebe.
• Mmụba na-arị elu maka condom nwanyị B2B ga-eduga mbelata nke ọnụ ahịa otu otu ha. Agbanyeghị, ka ndị na-ere ahịa na-agbasa ọnụnọ ha na ahịa azụmaahịa, ASP kwa ibe ga-abawanye n'oge amụma.
• Ndịda US chịrị ahịa ịdịmma mmekọahụ na oke ihe dịka 35.28% na 2020. A na-atụ anya na mba ahụ ga-ahụ nnukwu CAGR nke 8.53% n'oge amụma.
• Southern US ga-aga n'ihu na-abụ nnukwu ahịa maka condom n'oge amụma.
• Ọchịchọ maka condom ụmụ nwanyị ga-agba akaebe siri ike na mba ahụ mgbe mbata nke condom ụmụ nwanyị dị ọnụ ala wee gbasaa ọnụnọ azụmaahịa nke ndị isi egwuregwu.
• A na-atụ anya ka ọchịchọ condom ga-abawanye site n'aka ndị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ dịka USAID, UNFPA, WHO, na ndị NGO na ntọala ndị ọzọ.
• Mmepe ngwaahịa mgbe niile na iweta atụmatụ ọhụrụ bụ isi ihe iji nweta uto ahịa dị elu.
• Ụlọ ọrụ ndị nwere nkà na ụzụ na ego ego ka mma nwere ike ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ na-eme ka ngwaahịa ndị asọmpi ghara ịdị irè ọbụna tupu mmalite ha n'ahịa ma ọ bụ tupu ego R&D na-anata. Ya mere, ndị na-ere ahịa ga-emepụta teknụzụ ọhụrụ. Ndị egwuregwu mba ụwa na-achị ahịa ugbu a. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị egwuregwu mpaghara na ndị mba ọzọ nwere obere oke ahịa nwekwara ọnụnọ n'ahịa ahụ.
• Mkpa condom kacha mkpa na ozugbo dị n'etiti ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ. A na-atụ anya na ndị na-ere ahịa nwere ike ịbawanye ikike ha na-elekọta ndị ahịa a ga-enweta uru asọmpi n'ahịa ahụ.
• emetụtara ire ere condom na 2020, ọkachasị na H1 nke 2020. Nkeji mbụ nke 2020 hụrụ nnukwu ọdịda ire ere condom na mgbasa nke nje COVID-19. Agbanyeghị, mmetụta COVID-19 na ahịa condom bụ nke kacha sie ike na Q1 na Q2 mgbe mkpọchi siri ike. Site na ibelata mmachi na ịmalitegharị mmepụta, ahịa condom malitere ịgbake.
• nha ahịa & amụma sitere na ego ha nwetara | 2020-2026
• Mgbanwe Ahịa - Usoro ndị na-eduga, ndị na-anya ụgbọ ala, ihe mgbochi, na ohere itinye ego
• Nkewa Ahịa - Nyocha zuru ezu site na ngwaahịa, okike, ọwa nkesa, na ọdịdị ala
• Mpaghara asọmpi - 7 ndị na-ere ahịa isi na ndị na-ere ahịa 26 ndị ọzọ ka akọwapụtara na akụkọ ahụ.
Ahịa Ọdịmma Mmekọahụ US - Nkebi
• N'afọ 2020, akụkụ ihe eji egwuri egwu mmekọahụ ji oke 52.01% na-achịkwa ahịa ahụ. Ndị na-emepụta ihe egwuregwu ụmụaka na-enwe mmekọahụ na ndị na-ere ahịa na-enweta mmasị na mmasị a na-eto eto site n'inye ngwaahịa na "ngwa mmalite" maka ndị ahịa na-achọ ajụjụ. A na-atụ anya na nke a ga-ebute uto nke akụkụ n'ahịa ahụ.
• Mkpa maka ịzụ ahịa kwesịrị ekwesị nke ngwaahịa dị mma nke mmekọahụ na-eme ka ihe ndị dị otú ahụ dị mkpa dị mkpa na ụlọ ọrụ ịdị mma mmekọahụ ugbu a. Ndị ahịa nwoke na-enyekarị ndị na-ere ahịa ohere ka ha mepụta ngwaahịa maka ahịa ịdị mma mmekọahụ. Ihe karịrị nde ụmụ nwoke 30.1 na-ata ahụhụ site na arụrụ arụ erectile na US naanị, si otú a na-eke ohere dị ukwuu maka ndị na-emepụta mmanu mmekọahụ n'ihi mkpa mmanụ mmanye nke ụmụ nwoke.
• Ntinye nke ndị na-emepụta condom dị ka Reckitt Benckiser na Church & Dwight n'ahịa abawanyela ire ere egwuregwu ụmụaka na mmanye mmekọahụ site n'ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa dịka ụlọ ahịa ọpụrụiche mmekọahụ na ụlọ ahịa. Na mgbakwunye, ihe karịrị 95% nke ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ na ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa ịdepụta ọnụ ahịa nwere ike ịdabara na ụlọ ahịa pụrụiche mmekọahụ na ọwa nkesa brik na ngwa agha ndị ọzọ.
Ahịa ọdịmma Mmekọahụ US site na ngwaahịa
• Egwuregwu mmekọahụ
- Ndị na-ama jijiji
- Pennies rubber
– Ọkụkụ mgbanaka
- Ikpu roba
– Mkpuchi ihu/Nbụ
– Eriri & eriri-na-amụ
- Ngwa eji agbakọta
- Latex & na-abụghị latex
– Akara & ụlọ ọrụ
– Nwoke & Nwanyị
• Mmanya mmekọahụ
– Mmiri dabere
- Silicon dabeere
– Mmanụ dabeere
• Ndị ọzọ
Ahịa ọdịmma Mmekọahụ US site na okike
Ahịa Ọdịmma Mmekọahụ US site na ọwa nkesa
• Mkpọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị
• Ụlọ ahịa Ọpụrụiche
• Ndị na-egwu ahịa ahịa Mass
• Ụlọ ahịa ọgwụ/ụlọ ahịa ọgwụ
• Ụlọ ahịa nri
• Mkpọ ahịa n'ịntanetị
Ahịa Ọdịmma Mmekọahụ US – Ihe dị iche iche
Ndị na-egwu egwuregwu na-elekwasị anya n'ịkwalite ngwaahịa ndị mara mma nke ukwuu, dị ọnụ ala ma na-atọ ụtọ ịhụ mmalite nke ụfọdụ ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ dịka Veru (Ụlọ ọrụ ahụike nwanyị), Cupid Limited, HLL, Silk Parasol, na Tianjin Condombao Medical Polyurethane Tech. Co. bụ ụfọdụ n'ime ndị na-eme echiche n'ahịa condom nwanyi, na ngwaahịa ha gụnyere Origami Female Condom, Female Panty Condom, Natura Sensation Condoms, na condom ndị yiri dumbbell. Onyinye condom okomoko na-enye ọnụ ahịa dị oke ọnụ ma si otú ahụ ghọọ nnukwu ihe na-emepụta ego maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Asọmpi ahịa a na-atụ anya na ọ ga-akawanye njọ site na mmụba nke ngwaahịa/mgbakwunye ọrụ, ihe ọhụrụ teknụzụ, yana mmemme M&A.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala na usoro dị iche iche na -akwalite uto Market:
• Na-eto eto penetration nke Digital Marketplace
• Ihe ọhụrụ n'ime atụmatụ condom
• Mmekọahụ Mmekọahụ Mmemme Ịnya ụgbọ ala
• Ịbawanye nnabata nke ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ n'etiti ụmụ nwanyị
Ahịa Ọdịmma Mmekọahụ US - Geography
US nwere otu n'ime ndị mmadụ na-enwe mmekọahụ n'ihe gbasara ojiji condom na mmanụ mmanye mmekọahụ. Ndị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ dị ka USAID, UNFPA, Bill & Melinda Gates Foundation, na PSI bụ isi ihe na-akwalite uto maka ahịa ịdị mma mmekọahụ na US. Texas, Florida na North Carolina kọrọ ntinye ahịa kachasị elu n'etiti steeti ndịda. Gọọmenti na-elekwasị anya na igbochi na ịlụso nje HIV ọgụ na ndịda US, nke n'aka nke ya, na-akwalite uto nke ahịa ịdị mma mmekọahụ US. Onu ogugu Texas na 2019 mere atụmatụ na ihe ruru nde 29, yana ihe ruru nde iri na otu. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu dị otú ahụ na ọnụ ọgụgụ ezinụlọ ga-akwado ọchịchọ maka ngwaahịa ịdị mma mmekọahụ. Otu n'ime isi ihe na-eme ka ahịa ahụ dị na US bụ ire ụlọ ọrụ siri ike nke gọọmentị na ụlọ ọrụ gọọmentị etiti, NGO na otu ọrụ ebere. A na-atụ anya ka ndị na-egwu egwuregwu guzobe ụlọ ọrụ ndị ọzọ emelitere na mpaghara a ma na-edobe akụrụngwa dị n'ụsọ mmiri maka nkwalite uru yana mgbasawanye ntọala ndị ahịa, nke ga-akpali ọchịchọ maka ahịa ịdị mma mmekọahụ US.
Ahịa ọdịmma Mmekọahụ US site na Geography
Ndị na-ere ere
• Ụdị ndụ Holdco Pte. Ltd
• Ụka & Dwight
• Ngwaahịa diamond
• Otu Reckitt Benckiser
Ndị ọzọ na -ere ahịa a ma ama
• Yiri ịkpachara anya
• Ngwaahịa enyere ike
• Ezigbo ịhụnanya dị ọcha
• Otu HBM
• mmanu mmanu ID
• L ụdị
• Ụdị ndụ nke ọma
• Ụlọ nyocha sayensị MD
• Sensuous Mma
• Parasol silk
• Condom nọrọ na nchekwa
• STRATA dị iche iche Product Design
• Nlekọta ahụike Veru/Ụlọ ọrụ ahụike nwanyị
• Ụdị XR
Chọgharịa profaịlụ ahụike na ịdị mma anyị ka ịmatakwu gbasara ụlọ ọrụ ahụ.
Gụọ ụfọdụ akụkọ kacha ere ere:
• Ahịa Condom - Echiche zuru ụwa ọnụ na amụma 2021-2026
• Ahịa Ọdịmma Mmekọahụ - Echiche zuru ụwa ọnụ & amụma 2021-2026
• Ahịa mmanye Mmekọahụ - Echiche zuru ụwa ọnụ na amụma 2019-2024
• Ahịa Imma Mmekọahụ na Europe - Echiche ụlọ ọrụ na amụma 2019-2024
Samuel Sebastian ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 7, 2021 na 08:10
Ama m, isi ihe na-ebute uto nke ahịa ịdị mma mmekọahụ na North America bụ nkwalite na ihe ọhụrụ na ihe egwuregwu ụmụaka mmekọahụ, na condom. Mmepe ngwaahịa na-aga n'ihu na iwebata njirimara ọhụrụ bụ igodo iji nweta nnukwu ahịa ahịa.